Manafaka ny firmware vaovao UAVs Altimeter i Nanoradar - izay afaka mifandray mivantana amin'ny Ardupilot-News-Hunan Nanoradar Science & Technology Co., Ltd.,
Manafaka ny firmware vaovao UAVs Altimeter i Nanoradar - izay afaka mifandray mivantana amin'ny Ardupilot
Fotoana: 2019-08-01 Hits: 52
Mba hahafahana manohana ny mpamorona hampiasana radareter radareter, ny teknolojia NanoRadar dia namolavola ny protocol firmware radar ho an'ny fifehezana ny sidina ArduPilot. Raha tsy manova ny loharanom-pahalalana momba ny fanaraha-maso ny sidina ArduPilot isika dia afaka mampiasa haingana ny fitrandrahana onjam-peo NRA15 sy NRA24 milimetatra amin'ny dingana vitsivitsy vitsivitsy amin'ny toeran'ny tarika ArduPilot.
Amin'izany fomba izany dia mety manenona ny fotoana mihoatra ny 30% ho an'ny fanombanana ny vokatra sy ny fitsapana ny fanatanterahana izany, hanatsara be ny fahombiazan'ny fananganana vokatra vaovao.
Manomboka hatrany am-piandohana, dingana telo fotsiny:
Dingana 1: mampifandray radar miaraka amin'ny interface tsara fanaraha-maso fiaramanidina (ohatra ho ny interface tsara ny Pixhawk hardware TELEM2);
Dingana 2: apetraho ny faritry ny seranan-tsambo seranan'i TELEM2;
Dingana 3: apetraho ny faritry ny tranomboky radar;
Tehirizo sy avereno ny fanaraha-maso ny sidina aorian'ny famenoana ireo safidy etsy ambony (azafady mba antsoy ny varotra ho an'ny toetoetra voafaritra manokana), ary azo atao ny fanaovana ny fitsapana ivelany.
Fampidirana Radar NRA15:
NRA15 dia tsiranoka radar K-band miendrika manokana amin'ny alàlan'ny fananganana marina ny UAV. Mampifanaraka ny 24GHz-ISM-Band, misy tombony azo refesina 4cm, ny valin'ny famandrihana MAX 100 metatra, habe kely, ny fahatsapana avo, ny lanja maivana, ny fampidirana mora sy ny fampisehoana maharitra, izay manome fahafaham-po ny fangatahana amin'ny fantsom-pifandraisana tsy manam-paharoa (UAV). helikoptera, fiaramanidina kely ary sehatra hafa.
Momba ny sehatra firmware mifehy ny fanaraha-maso ny sidina Pixhawk:
Ny adiresin'ny tranonkala Ardupilot momba ny fanaraha-maso ny sidina malalaka: https://github.com/ArduPilot/ardupilot
PREV: Fandefasana mahomby amin'ny alàlan'ny radara fohy 77GHz amin'ny fihoaran'ny fifandonana amin'ny NanoRadar
MANARAKA : Nanoradar dia manasa mpiara-miasa hiaraka aminay amin'ny CPSE 2019 any Shenzhen China